Tokony hanomboka hanorina rohy amin'ny tranokala ve aho hanolotra tranonkala ho an'ny backlinks alohan'ny zavatra hafa?
Amin'izao fotoana izao, ireo fotodrafitr'asa goavana tsy misy pejy momba ny Search Engine dia nanjary niavaka kokoa noho ireo fitaovana hafa ao amin'ny pejy SEO. Raha ny marina, ny tranokalan'ny tranokala (anisan'izany ny hetsika ilaina hanolorana tranonkala ho an'ny backlinks) dia mifandraika tanteraka amin'ny pejy SEO tsy an-tselika, izay ampahany manan-danja amin'ny piozila tanteraka momba ny lozam-pifaneraserana amin'ny alàlan'ny paikady. Midika izany fa ny vohikala na bilaogy rehetra dia tokony hanana tari-dahatsary mafonja matihanina amin'ny fampiroboroboana ankapobeny amin'ny fananganana fahefana ambony, ary koa ny tanjona faratampony hifehezana ny SERPs Google. Mazava ho azy fa mila fotoana be ny lanjan'ny liona amin'ny paikady hanorenana rohy, ary indraindray dia mety mitaky vola kely fotsiny aza. Na dia izany aza, ny fananana rohy matanjaka mafonja dia mendrika hanaovana izany na izany aza, izay handoa foana, indrindra amin'ny fomba fijery maharitra - water ejector design.
Fandresena haingana amin'ny fanorenana fifandraisana
Araka ny efa nolazaiko, ny fananganana làlam-peo momba ny rohy dia tokony ho anisan'ny laharam-pahamehanao. Mazava ho azy, raha nanapa-kevitra ny handefa tranokala ho an'ny backlinks ianao na efa manana ny zavatra rehetra eo amin'ny toerany - tsara ho anao! Saingy tsy ampy izany raha te hanana kickstart mahafinaritra ho an'ny profil ny tranonkalan'ny tranonkalanao. Efa nandramanao ve ireo orinasam-pandraharahana manokana momba ny orinasam-pandraharahana mba hametraka tranokala ho an'ny backlinks? Ary raha mbola misalasala ianao hoe inona no manakaiky voalohany, dia eto izy ireo. Ireto ambany ireto ny lisitra tetikasa fifandraisana an-tariby izay afaka manome anao haingana ny vokatra azo tsoahina amin'ny SEO.
Tsy ilaina ny milaza fa ny fampiasana ny torolàlana eo an-toerana mba handefasana tranokala ho an'ny backlinks dia mety ny fomba tsara indrindra hanombohana fananganana backlinks. Raha miara-miasa amin'ireto fotodrafitrasa ireto ianao avy amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny fanombohan'ny tranokala na blôginao - efa mihetsika eo amin'ny làlana marina ianao. Aza misalasala ny mandany fotoana sy ezaka mba hahazoana antoka fa misy lisitra ianao eo amin'ny sehatra lehibe rehetra. Ampidiro avokoa ireo fampahalalana ilaina, toy ny toerana misy ny orinasa, ny ora fiasàna, ny fampahafantarana ny fifandraisana, sns. Amin'izany fomba izany, tsy hahazo miverina valiny mahafa-po fotsiny ianao, fa hanatsara ny fomba fijerinao amin'ny aterineto ho an'ny mpikaroka ao an-toerana, ary koa ny fampisehoana ara-barotra amin'ny ankapobeny.
Andao hiatrika izany - ireo karazana lisitry ny orinasam-pandraharahana ireo dia mety ho toa sarotra, indrindra raha oharina amin'ny lisitry ny orinasa ankapobeny. Na dia izany aza dia tsy tokony ho tsinontsinoavina velively ny fitantanana ny sehatra indostrialy, satria izy ireo dia mbola fomba tsara hanamafisana ny fananganana tranonkalanao raha vao mandeha ny tranokala na ny bilaogy. Mariho anefa fa haka fotoana kely kokoa ny fandefasana ireny fanontana ireny, saingy aza matahotra. Amin'ny ankapobeny, ireo lisitra ireo dia mila mamita ny fepetra fisoratana anarana alohan'ny hametrahana tranonkala ho an'ny backlinks farany - fa ny tombony azo raisina mendrika dia mendrika ny ezaka rehetra laninao any, ho azo antoka.
Mitadiava adiresy fananganana rohy amin'ny alàlan'ny finday Internet, tadidio fa tokony hanana ny fampahalalana momba ny raharaham-barotra amin'ny lafiny tsara ianao ary mifanaraka tsara amin'ny tarehimarika momba ny raharaham-barotra voatanisa any amin'ny toerana hafa Web. Raha tsy izany, dia afaka miatrika olana sasantsasany avy amin'ny sisintany lehibe amin'ny karoka ianao, ary koa ny fomba fanao indostrialy. Farany, miompana amin'ny asa ianao ary ataovy azo antoka fa manana fanamarinana indroa ianao fa eo amin'ny toerana mety sy tena manan-danja alohan'ny hamaranao ny fe-potoana fandraketana rehetra mba hahazoana ireo valiny mendrika hatao.